Kedu ihe bụ Nnukwu data? Kedu uru nke nnukwu data? | Martech Zone
Nkwa nke nnukwu data bụ na ụlọ ọrụ ga-enwe ọgụgụ isi karịa ha iji mee mkpebi na amụma ziri ezi banyere etu azụmahịa ha si arụ ọrụ. Ka anyị mata ihe Big Data, ihe ọ bụ, na ihe kpatara anyị ji eji ya.
Nnukwu data bụ nnukwu band
Ọ bụghị ihe anyị na-ekwu maka ya, mana ị nwere ike ige egwu dị egwu mgbe ị na-agụ maka Big Data. Agaghị m etinye vidiyo egwu… ọ bụghị ezigbo nchekwa maka ọrụ. PS: M na-eche ma ọ bụrụ na ha ahọrọ aha ahụ iji jide oke mmụba nke nnukwu data na-ewuli elu.
Kedu ihe bụ Data Big?
Nnukwu data bụ okwu eji kọwaa nchịkọta, nhazi na nnweta nnukwu mpịakọta nke data ntanetị na ezigbo oge. Ise nke atọ bụ olu, ọsọ na ọtụtụ ya na iji Doug Laney). Ndị ụlọ ọrụ na - ejikọ ahịa, ire ahịa, data ndị ahịa, data azụmahịa, mkparịta ụka mmekọrịta mmadụ na data dị na mpụga dị ka ọnụahịa ngwaahịa, ihu igwe na ozi ọma iji chọpụta njigide na ihe kpatara usoro ọnụọgụ iji nyere ha aka ịme mkpebi ziri ezi.
Kedu ihe kpatara nnukwu data ji dị iche?
N'oge ochie… ịmara… afọ ole na ole gara aga, anyị ga-eji sistemu wepụ, gbanwee ma buo data (ETL) n'ime nnukwu ụlọ nkwakọba ihe nke nwere azịza ọgụgụ isi azụmaahịa wuru n'elu ha maka ịkọ akụkọ. N'oge ụfọdụ, sistemụ niile ga-akwado ma jikọta data n'ime nchekwa data ebe enwere ike ịgba ọsọ na onye ọ bụla nwere ike ịghọta ihe na-eme.
Nsogbu bụ na teknụzụ nchekwa data enweghị ike ijikwa ọtụtụ iyi data na-aga n'ihu. O nweghi ike ijikwa olu data. O nweghi ike gbanwee data abata na ozugbo. Enweghị akụrụngwa akuko na-enweghị ike ịnagide ihe ọ bụla mana ọ bụghị ajụjụ metụtara mmekọrịta na njedebe njedebe. Nnukwu data na-enye nnabata igwe ojii, nhazi usoro na nke kachasị ahaziri ahazi, akụrụngwa akụrụngwa na ikike mmịpụta, yana mkparịta ụka mkparịta ụka ka ewepụtara iji nye nyocha zuru oke nke na-enyere ndị azụmaahịa aka ịme mkpebi ka mma.
Mkpebi achụmnta ego ka mma pụtara na ụlọ ọrụ nwere ike belata ihe ize ndụ nke mkpebi ha, ma mee mkpebi ka mma nke na-ebelata ụgwọ ma na-abawanye ahịa na ire ahịa.
Kedu uru nke nnukwu data?
Teknụzụ kọmputa na-ejegharị site n'ihe ize ndụ na ohere ndị metụtara ijikọ nnukwu data na ụlọ ọrụ.
Nnukwu data na-abịa n'oge - 60% nke ụbọchị ọrụ ọ bụla, ndị ọrụ ihe ọmụma na-etinye mbọ iji chọta ma jikwaa data.
Nnukwu data enwere ike ịnweta - Ọkara nke ndị isi ụlọ ọrụ na-akọ na ịnweta data ziri ezi siri ike.
Nnukwu data bụ Holistic - A na - edebe ozi ugbu a na silos n'ime nzukọ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịchọta data azụmaahịa na weebụsaịtị nchịkọta, mkpanaka nchịkọta, elekọta mmadụ nchịkọta, CRMs, A / B Ngwa nnwale, sistemụ ịre ahịa email, na ndị ọzọ… nke ọ bụla na-elekwasị anya na silo ya.
Nnukwu data kwesiri ntukwasi obi - 29% nke ụlọ ọrụ na-atụle ego ego nke ogo data adịghị mma. Ihe dị mfe dịka nyochaa ọtụtụ sistemụ maka mmelite ozi kọntaktị ndị ahịa nwere ike ịchekwa ọtụtụ nde dollar.
Nnukwu data dị mkpa - 43% nke ụlọ ọrụ enweghị afọ ojuju na ngwaọrụ ha nwere ike nyocha data na-adịghị mkpa. Ihe dị mfe dị ka nzacha ndị ahịa na weebụ gị nchịkọta nwere ike inye ọtụtụ nghọta n'ime mbọ ị na-enweta.
Nnukwu data echebere - Mmebi nchebe data na-efu $ 214 kwa onye ahịa. Ihe owuwu echekwara nke nnukwu data na ndị mmekọ teknụzụ wuru nwere ike ịchekwa ụlọ ọrụ 1.6% nke ego ha na-enweta kwa afọ.
Nnukwu ikike nwere ikike - 80% nke ndị otu na-alụ ọgụ na ọtụtụ nsụgharị nke eziokwu dabere na isi iyi data ha. Site na ijikọta otutu ihe omuma, otutu ulo oru nwere ike meputa ihe omuma nke oma.
Nnukwu data na-arụ ọrụ - data ochie ma ọ bụ nke na-adịghị mma na-ebute 46% nke ụlọ ọrụ na-eme mkpebi ọjọọ nwere ike ịme ọtụtụ ijeri.
Nnukwu data na nchịkọta akụkọ 2017
2017 ga-abụ afọ pụrụ iche ma na-atọ ụtọ nke ukwuu maka azụmazụ teknụzụ n'ọtụtụ ụzọ. Ndị ọchụnta ego ga-agbasi mbọ ike idozi ọnụ ọgụgụ na elebara ndị ahịa anya n'otu n'otu na-emebighị iwu nke arụmọrụ. Ketan Pandit, Aureus Nghọta
Nke a bụ ebe ị ga-ahụ nnukwu data etinye iji:
94% nke ndị ọkachamara n'ahịa ahịa kwuru nhazi nke ahụmịhe ndị ahịa dị ezigbo mkpa
$ 30 nde kwa afọ na-echekwa site leverage elekọta mmadụ media data na nkwupụta na wayo nchịkọta
Site na 2020, 66% nke ụlọ akụ ga-enwe blockchain na mmepụta azụmahịa na n'ọtụtụ
Ndị na-ahazi ga-adabere na ya smart data karia ma e jiri ya tụnyere nnukwu data.
Ngwa igwe-mmadụ (M2H) mmekorita nke ndi mmadu g’eme ka ihere ruo% 85 rue 2020
Ulo oru na etinye ego 300% karia Ngwukota artificial (AI) na 2017 karịa ka ha mere na 2016
25% ibu ọnụego na ntoputa nke okwu dị ka isi iyi dị mkpa nke data na-akwadoghị
Ikike Ichefu (R2BF) ga-elekwasị anya n 'ụwa niile n'agbanyeghị isi data
Ndi 43% nke ndi oru ndi ahia enweghi ezigbo oge nchịkọta ga-anọgide na-ada mbà
Site na 2020, na Ọdịdị gbara ume (AR) Ahịa ga - eru ijeri $ 90 ma e jiri ya tụnyere $ 30 nke Virtual Reality
Tags: data ngosinghọta nke aureusnnukwu datablockchainọgụgụ isi azụmahịadata njikwandabere dataNche datawdgwepụdata zuru ezuinformaticsibum2hdata dị mkpadata n'ogegbanweentụkwasị obi datadịgasị iche icheọsọ ọsọeziokwuolu
Sep 13, 2017 na 1: 34 AM